Mogadishu Journal » Liverpool ayaa waxaa soo wajahay dhaawac cusub
Nasiib xumadii Liverpool ee dhaawacyadii daafaca ayaa sii socday iyadoo kabtanka Jordan Henderson uu soo gaaray dhibaato gumaarka ah oo muuqata kulankii Everton.
Jordan Henderson ayaa dhaawac muruqa ah oo gumaarka ah ka soo gaadhay kulankii Merseyside Derby iyada oo ay wali sii socdaan dhibaatooyinka Liverpool.
Iyadoo Liverpool ay ku raadjoogtay Richarlison weerarkiisii ​​hore ee Anfield, kabtan Henderson ayaa lagu qasbay inuu baxo daqiiqadii 30aad. Taasi waxay ahayd wax yar uun ka dib markii uu ku dhawaaday inuu barbareeyo kubad qurux badan oo uu si fiican u badbaadiyay goolhayaha Everton Jordan Pickford.
Henderson ayaa soo jiitay isagoo la tartamaya Abdoulaye Doucoure, in kastoo uu isku dayay inuu sii wado, wuxuu ku qasbanaaday inuu banneeyo Nathaniel Phillips.
Waxay keentay in waqti kale la sameeyo, daafaca dhexe ee aan la tijaabin ee Phillips iyo Ozan Kabak ee tababaraha Liverpool Jurgen Klopp, kaasoo awalba awoodi waayey inuu u yeero Fabinho, laftiisa ayaa istaagi kara Joe Gomez, Joel Matip iyo Virgil van Dijk.
Van Dijk ayuu dhaawac jilibka ahi soo gaadhay xilli ciyaareedkii dhamaadkii October ee kulankii Goodison Park.
Difaaca Liverpool ayaa isla markiiba la tijaabiyay ka dib bixitaankii Henderson, iyadoo Alisson uu ilaaliyay Seamus Coleman kubad madax ah oo udhow.